In Zimbabwe: Public workers reject government job cuts plan - World - Pulse
In Zimbabwe : Public workers reject government job cuts plan
Salaries for ministers and senior officials would be cut by up to 20 percent and Zimbabwe would close some embassies abroad.
Zimbabwe&apos;s main public service union on Friday rejected government plans to cut 25,000 jobs and suspend annual bonuses, saying that would hurt workers already struggling to make ends meet.
"We believe these measures are ill-conceived and can only further entrench the doom and gloom that has become the lot of the average civil servant," said Cecelia Alexander, head of the Apex Council which called a two-day walkout by teachers, doctors and nurses over pay delays in July, part of the biggest strike in Zimbabwe in 10 years.
Under Chinamasa&apos;s plan, the civil service would shed 25,000 jobs, reducing the workforce to 273,000 by the end of 2017. Salaries for ministers and senior officials would be cut by up to 20 percent and Zimbabwe would close some embassies abroad.
Chinamasa is leading Zimbabwe&apos;s re-engagement with lenders including the International Monetary Fund and World Bank which are demanding cuts in the wages bill and the clearance of $1.8 billion in debt arrears before they agree to new funding.